को नचाहिएका - भाग 21 | Apg29
को नचाहिएका - भाग 21
मेरो जारी र खराब एक सानो केटा मलाई कथा सार्दा।
मेरो पालुङ्गो भाइ Stig चार वर्षअघि Annerstads चर्चमा पुष्टि भएको थियो। म आफ्नो पुष्टि सम्झना छैन तर म पनि मलाई पुष्टि गर्न चाहन्थे। Stig मलाई थाहा छैन तर म चाहन्थे नै पुष्टि कारण केही सम्भव उपहार प्राप्त गर्न, पुष्टि गर्न, तर यो कारणले मेरो भाग मा एक साँचो चासो गर्न बस थियो।
म मेरो जीवन मा फिर्ता हेर्न जब, म मेरो पुष्टि चासो कारण परमेश्वरको लागि इमानदार र गहिरो खोज थियो भनेर बुझ्न। मेरो मनमा वहाँ Disbanded थियो।
पुष्टि शिक्षण पादरी द्वारा आयोजित थियो Annerstads चर्च द्वारा प्रबन्ध मिलाए। शिक्षाले इलाकाका घर को दोस्रो तल्ला मा एक कोठा मा भएको थियो। हामी पढ्ने दुवै केटाहरू र बालिका मा शायद 20 जवान मानिसहरू थिए।
तर म पुष्टि पाठ कठिन र कठिन थिए फेला परेन। हामी म को केहि बुझेनन् कि मसीही विश्वास बारे एक पुस्तक बाट ठूलो स्वरले पढेर गरिएको थियो। म के त हामीलाई catechist गर्न सिकाइएको थियो आज केही सम्झना। शायद म मेरो जन्मदिन अघि दिन थियो जो पुष्टि मिति, यसलाई त सम्झना छैन।
तर जस्तै पुष्टि परिवर्तन वा व्यक्तिको रूपमा मलाई असर गर्न सकेन। म अझै पनि उही पुरानो क्रिस थियो। यो हामी चर्च जान र हामीलाई पुष्टि गर्न गर्नुअघि घटना द्वारा साबित भएको थियो। पुजारी र सबै catechist पुष्टि अघि एउटा सानो कोठा भेला थियो।
जब म मैले गरे जो बाथरूम, जान आवश्यक छ। म फिर्ता आउँदा, म पानी सेतो chemise मा, म आफ्ना हात धोए थियो जब splashed थियो catechist पल्ट, सबै। कसैले यो औंल्याए, तर म जब म पिशाब म यसलाई बन्द थियो लाग्यो, त्यसैले म पुजारी र सबै catechist अघि एक राम्रो चर्को expletive मा राखे। मंत्री मेरो बिरामी-चुनिएको शब्दहरू औंल्याए, र म मेरो अनुहार मा pionröd स्तब्ध भएको थियो। तर हामी चर्च र पुष्टि गए रूपमा बन्द कुनै पनि समस्या बिना बित्यो।
हामी चर्च गए जब म मलाई फैलयो र बाइबल र भजन पुस्तक गर्व आयोजित। तर के पुष्टि समयमा, म कुनै विचार छ भने थियो।
म पुष्टि मेरो साँचो चासो परमेश्वरले मलाई खोजे थियो लाग्छ। यो पनि मलाई अभिव्यक्ति म मेरो जवानी मा परमेश्वरले खोजे थियो। तर म यो परमेश्वरको थियो भनेर थाह थियो कहिल्यै।
म मेरो जीवन मा फिर्ता हेर्न जब, म परमेश्वरले मलाई खोजे गर्दा अन्य घटनाहरू हेर्नुहोस्। यसलाई जो म पहिले नै केही indenna पुस्तक बारेमा भन्नुभयो छ जस्तो देखिने सानो घटना, हुन सक्छ, तर त्यहाँ अचानक परमेश्वरको अवस्थित छ gleamed र उहाँले मलाई देखे कि केही घटनाहरू छन्।
पछि, म परमेश्वरको सान्टा क्लाउस जस्तै परमेश्वरको यदि यो प्रकारको गएको थियो कुनै पनि उपहार दिन छैन धम्की गर्ने, तर परमेश्वरले सानो मान्छे को लागि एक indescribable प्रेम थियो जो थियो भन्ने महसुस थियो। यो मायालु परमेश्वर समय र एक सानो मातहत अनिश्चित तंग केटा महसुस गर्न समय दिनुभयो, तर उहाँले जो यो कि आफ्नो जवान मनको ढोका ढकढक्याउन थियो थाहा थिएन
म धेरै वर्ष पछि पुजारी पहिले एक frikyrkopastor भएको थियो थियो। त्यसैले उहाँले पर्छ बचत गर्न कसरी ज्ञान र मसीही थियो, तर उहाँले हामीलाई यो बताउन थिएन। उहाँले यो गरेको कुरा भने। त्यसपछि म पहिले नै सुरक्षित हुन सक्छ गरिएको र सबै मेरो जीवन परिवर्तन गर्यो। धेरै दुःख र दुःख मेरो जीवनमा बचा गरिएको थियो। Admittedly, त्यो अचम्मको बाइबल पद यूहन्ना3र हाम्रो biblars को 16 कवर उद्धृत थियो। पद पाठ हो:
"परमेश्वरको लागि त उहाँले आफ्नो मात्र जसले उहाँलाई नष्ट मा पर्छ तर अनन्त जीवन छ भन्ने विश्वास गर्छ कि, छोरा प्यारो दिनुभएको संसारमा प्रेम गर्नुभयो।"
तर उहाँले बाइबलमा कि पद उद्धृत थियो, म पछि धेरै वर्ष सम्म देख्यो, र उहाँले भन्नुभयो थिएन वा हाम्रो लागि पद बताए। पुष्टि मलाई सुरक्षित यसरी थियो।
मेरो बाल्यकाल समयमा, यो कहिलेकाहीं परमेश्वरको रिमाइन्डर अन्धकार मार्फत झलक सकेन। म त यसलाई बुझेनन्, तर म Retrospect मा धेरै वर्ष पछि थियो र मेरो जीवन मा फिर्ता हेर्न सक्छ जब, म स्पष्ट देख्न सक्छ।
कुरा यस्तो मेरो स्मरणमा सीधा जान सक्छ ठीक nsturmotiv संग पोस्टर थिए। उदाहरणका लागि, रूखहरू पछि एक सूर्य। र एक पद। म कहिले काँही यस्तो पोस्टर मार्फत, उदाहरणका लागि, इलाकाका हल मा आउन सक्छ। म तिनीहरूलाई बाइबल पद पढ्दा, म तिनीहरूले के शक्ति समावेश गर्न सक्ने छक्क थियो। तिनीहरूले जीवित थिए र मेरो मनमा सही कुरा गर्न सकेनौं। म राम्रो पोस्टर मा छक्क र छक्क देख कसरी एक यस्तो अवसर सम्झना। यो धेरै पटक भयो र परमेश्वरले मलाई बोल्नुभयो र नै यी विभिन्न तरिकामा प्रकट गरेको छ कि विभिन्न अवसरमा। तर म यसलाई धेरै वर्ष पछि सम्म तिनी थाह कहिल्यै।
इंग्रिड Ljunggren धेरै राम्रो शैक्षिक सूचीबद्ध पाठ थियो। अक्सर, त्यो मलाई आत्म-कथित कुराहरू बारे बताए। यो उनको सुन्न र त्यो भने र सिकाउनुभयो के मा लिन सजिलो भएको थियो।
धर्म मा एक बिन्दुमा म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। त्यो एक मसीही थियो भने मलाई थाहा छैन, तर उनले र उनको पति नवजात शिशुलाई बिरामी खसेको थियो र hospitalized थियो कि मलाई भन्नुभयो। तिनीहरूले त्यसपछि छोराछोरीलाई एकदम राम्रो थियो जो परमेश्वरको प्रार्थना गरे। तिनीहरूले प्रार्थना जवाफ मिल्यो। यो त्यो सारा वर्ग बताए। म चुपचाप बसे र मेरो डेस्क मा छक्क मा सुने।
स्कूल हामी हामी नवौं ग्रेड, म स्पष्ट थाहा धेरै गाह्रो थियो जसको लागि चयन हुनेछ के को एक सा प्राप्त काम संसारको एक झलक प्राप्त गर्न विभिन्न ठाउँमा प्रत्येक semester मा कहिलेकाँही prya र शायद भनेर समावेश गरिएको थियो। म Artistically एक Decorator रूपमा इच्छुक म एक पटक prya विभाग स्टोर टेम्पो Ljungby थियो भएकोले। तिनीहरूले आफ्नै सज्जाकार कर्मचारीहरु जो संकेत गरे थियो। दुर्भाग्यवश, म यो त राम्रो मनपराएका र यो अग्रसर गाह्रो थियो। यो कारणले गर्दा मेरो मातहत र अनिश्चित मार्गमा शायद थियो।
किनभने मेरो सदस्यता र कला चासो को म prya हेलसिंगबर्ग मा एक मसीही कलेजमा परीक्षण लाइन मा एक हप्ताको प्राप्त भनेर अर्को semester को कुरा थियो। Psyokonsulenten एक हप्ता त्यहाँ मलाई प्राप्त गर्न व्यवस्थित। म सम्झना म बस म मेरो लामो यात्रा चिन्तित भए तापनि हेलसिंगबर्ग तल सवारी थियो, तर यो राम्रो भयो, र त्यसपछि स्कूल देखि एक शिक्षक आए र मलाई छानिएन। म आफ्नो परिवार संग घर मा बस्ने थियो।
म तिनीहरू मसीहीहरूले थिए बुझे, तर म यसलाई भनाइको तात्पर्य थाहा थिएन। र न तिनीहरूले मलाई यो बारेमा केहि बताए।
कलेज मा एक साँझ, म विद्यार्थीहरूको एउटा समूह संग खडा र केही फुटबल खेलाडी हेर्नुभयो थियो। जब म तिनीहरूलाई को एक सोधे भने यो स्कूल लागि मसीही थियो। त्यसपछि म त्यो मसीहीहरूले टाढा बताए जसमा उहाँलाई लामो प्रदर्शनी भएको थियो। म एक मसीही वातावरण थियो, तर येशूको बारेमा केहि सुनिन। त्यसैले बन्द अझै यति टाढा ...
मेरो पालुङ्गो घर घर मा, म पार्लर मा bookcase मा tucked थियो एउटा सानो सेतो गिदोनले बाइबल फेला परेन। म यसलाई प्राप्त गरेकी थाहा छैन। शायद यो मेरो पालुङ्गो भाइ थियो। म यो मेरो थियो कि सम्झना छैन। उहाँले। Gidroniter मा गएका थिए कि एक स्कूल कक्षा बाइबल नयाँ नियमका वितरण godeonierna बाहिर विद्यालय र होटल कोठा र जेलमा snmst बीच मा बाइबल सौंपन लागि बोलाइएका गर्दा सायद मेरो भाइ यो पायो। तिनीहरूले पुरानो नियममा गिदोनले पछि नाम लिएका थिए।
म पढ्न को लागि पार्लर मा खैरो सोफा मा राख्नु। यसलाई म स्थानीय समाचार पत्र मलाई र केही वर्षअघि मेरो कार्टून बारेमा कथा थियो जब बसे समान ओछ्यान थियो।
म मत्तीको सुसमाचार मा पढ्दा सुरु र बस म पढ्न के द्वारा दूर Blown थियो। यो कस्तो thrill थियो! म रोक्न सकेन।
म येशूको बारेमा पढ्न र कसरी उहाँले क्रूसमा थियो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिनमा मृत फेरि खडा छ। सारा नाटकीय घटना मेरो मन मा चित्रित भएको थियो र म साँच्चै यो देख्न सक्थे।
म पढ्न रूपमा शब्दहरू जीवित थिए। तिनीहरूले मेरो हृदयमा सही भेटे। यो सिर्फ एक साधारण कथा थियो।
मेरी सिरियल को नचाहिएका अनुयायी
भाग 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
यो सिरियल onwards बाल्यकाल देखि मेरो जीवन कथा हो। म नाङ्गो र candidly बताउनुहोस्। एक धेरै म कहिल्यै पहिले बारेमा भन्नुभयो छ। कथा केही नाम काल्पनिक हो।
Vecka 17, onsdag 24 april 2019 kl. 08:59